Ma Tirin Karayo Qaladaadkii Aanu Samaynay, Nolosha Ayaanu Iyaga U Sahalnay- Jurgen Klopp Oo Eedayn Wayn U Soo Jeediyay Ciyaartoyda Kooxdiisa Liverpool. - GOOL24.NET
Ma Tirin Karayo Qaladaadkii Aanu Samaynay, Nolosha Ayaanu Iyaga U Sahalnay- Jurgen Klopp Oo Eedayn Wayn U Soo Jeediyay Ciyaartoyda Kooxdiisa Liverpool.
Tababaraha kooxda Liverpool ee Jurgen Klopp ayaa sharaxaad u waayay in ka hadlo wixii ay kooxdiisa Reds kala soo laabtay kulankii Champions League ee Red Ster Belgrade. Jurgen Klopp ayaa la waydiiyay in uu farihiisa ku tiriyo intii qalad ee ay ciyaartoyda kooxdiisu ka sameeyeen kulankii Champions League.
Laakiin Jurgen Klopp ayaa tilmaamay in toban farood oo kaliya uu leeyahay taas oo aan gaadhayn tirada qaladaadkii ay kooxdiisu ka samaysay kulankii Red Star Belgrade wuxuuna ku dooday in ciyaartoyda kooxdiisu ay nolosha u sahleen kooxda Red Star.
Liverpool iyo Napoli ayaa min 6 dhicbood yeeshay iyada oo PSG ay 5 dhibcood haysato laakiin Liverpool ayaa heli kartay in ay talaabo wayn u qaado wareega 16ka kooxood waxayna hadda sugi doontaa kulamada finalka oo kale ah ee ay la ciyaari doonto kooxaha Napoli iyo PSG.
Liverpool ayaa Anfield ku soo dhawayn doonta kooxda Napoli oo ay hore guuldaro ugala soo kulantay halka PSG ay ku booqan doonto Paris iyada oo hore Anfield ugu garaacday kooxda reer France balse PSG ayaa markeeda boqan doonta Red Star Belgrade oo ay hore Paris ugu soo gumaaday.
Ugu horayn Jurgen Klopp oo ka hadlaya isbadaladii uu sameeyay iyo sida ayna u noqon kuwo guulaystay ayaa yidhi: “Micno ayay samaynaysay in aanu dhawr isbadal samaynay, dhawr ay waajib nagu ahayd in aanu samayno iyo dhawr aanu doonaynay in aanu samayno laakiin si sahlan waxaan u sheegi karnaa in dhamaadkii ayna shaqayn”.
Klopp ayaa la waydiiyay in uu farihiisa ku tiriyo qaladaadkii ay ciyaartoyda kooxdiisa Liverpool ka sameeyeen klankii Red Star wuxuuna ku jawaabay: “Waxaan leeyahay toban farood oo kaliya. Nolosha ayaanu u sahalnay iyaga, way u qalmeen samirkaas ay muujiyeen”
Klopp oo sababtii ay u guuldaraysteen ka hadlaya ayaa yidhi: “Waanu guuldaraysanay sababtoo ah waxaanu ku hoosaynay 1-0 kadib 2-0, anigu ma sheegi karo in ay halis tahay in aanu haddaba laba jeer guuldaraysanay laakiin waxaa waajib ah in aanu hubino in ayna markale dhicin”.
Klopp oo ka hadlaya kulanka ay PSG booqan doonaan iyo waliba kulanka ay Anfield ku soo dhawayn doonaan Napoli ayaa yidhi: “Haddii aanu samayno (bandhiga liita ee martida) waxay noqon doontaa wax adag maadaama oo kulanka xigaa uu yahay kulan marti ah. Kulankii ugu danbeeyay ee Napoli waxa uu ahaa mid aad u adag, waxaa waajib nagu ah in aanu hubino in aad markale su’aasha waydiin kartaan, waa xili hore in la sheego sida ay tahay”.